Carpet Factory Factory, mpamatsy - Mpanamboatra Carpet China
Ny mats an'ny coil vita amin'ny landy nataon'i Bensen dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy fandotoana, tsy misy akora manimba olona, ​​ary efa nandalo fitsapana kalitao.
Carpet Mat ho an'ny tongotra tongotra maharitra sy miaro
Raha ampitahaina amin'ny tsihy vita amin'ny hoditra nentim-paharazana, tsihy lamba, tsihy vita amin'ny landy dia azo tapahina sy volavolain'ny tompony, ary mora diovina, tsy mora ny mamokatra fofona mamy.
Factory Direct Supply China Carpet Car Floor
Mats tongotra coil tongotra dia afaka manala ny havizanan'ny tongotra ary mampitombo ny fahafinaretana amin'ny fitondrana fiara. Ireo kodiarana landy coil dia manana elastika, fahaiza-milanja mavesatra ary tsy misy fiovana rehefa voahidy.
Fivarotana mafana mifaninana amidy amin'ny vidin'ny karipetra ho an'ny fiara mandeha amin'ny fiara
Amin'ny maha karazana akanjon'ny tongotra an-tongotra azy dia manana tombony miavaka ny lamban-tongotra vita amin'ny landy, toy ny fiantohana ny fampiononana rehefa manao fanadiovana mora sy fikarakarana mora foana.
Karazan-tsarimihetsika gorodona gorodona gorodona mora foana
Ny fampiasana fitaovana voajanahary sy sariaka amin'ny tontolo iainana hamokarana tsihy amin'ny tongotra, miaraka amina toetra milamina sy tsara tarehy. Antsipiriany misimisy kokoa, mifandraisa aminay.
Kalitaon'ny kalitaon'ny kalitaon'ny kalitaon'ny kalitaon'ny taolam-paty
Ny akora matevina amin'ny gorodona fiara Coil dia ny PVC, izay malefaka kokoa sy mahazo aina kokoa raha ampitahaina amin'ny tsihy tongotra hafa, ary fehin-tongotra amin'ny tanjona kendrena mandritra ny vanim-potoana.
Namboarina ho toy izany Car Accessories Factory Car Floor Mat Carpet Roll
PVC coil car mat tsy mahazaka akanjo tsy mihetsika, mora diovina ary karakara tsara, azo tapahina araka ny sitrapony amin'ny toerana maro. Mifandraisa aminay avy hatrany raha mila fanazavana fanampiny.
Car Accessory Ny karipetra gorodona rehetra amin'ny toetr'andro amin'ny loko madio
Mats fiara peratra landy dia manana fahaizana mahery vaika hanafina loto ary afaka mitazona ny fahadiovan'ny fiara mandritra ny fotoana lava.
Waterproof PVC Floor Car Foot Mat Mat ho an'ny Auto Interiors
Ny tsihy faribolana vita amin'ny landy dia misy fanoherana voajanahary sy tantera-drano, ny firafitry ny faribolana tsy manam-paharoa dia afaka manidy ny tavy tsy handehanan'ny rano, mitazona ny fiara ho madio sy milamina amin'ny fotoana rehetra, mora diovina, flush madio.
Eco-friendly PVC Coil Loop Car Foot Mat Auto Carpet ho an'ny atitany Vechicle
Ny firafitry ny tsihy vita amin'ny landy dia mora karakaraina, mora diovina, afaka manakana ny fitomboan'ny bakteria, manana fiarovana tsara sy vokan'ny bakteria, fiarovana feno ny fahadiovan'ny atin'ny fiara.
Ny tsihy vita amin'ny peratra landy dia tsy mihenjana eo ambanin'ny maripana ambany ary tsy miempo ao ambany maripana ambony. Manana fanoherana ny toetr'andro tsara, mandavantaona, na mangatsiaka, tsy miova ny hafanana, tsy mihena, azo ianteherana ny kalitao ary ampiasaina tsingerina lava.
Mat Maty amin'ny tantera-drano tsy azo tanterahina vita amin'ny kodiarana PVC ao anaty horonan-taratasy miaraka amin'ny lamosina manohitra
Ny faribolan'ny landy nataon'i Benson dia vita tamin'ny fitambarana resina PVC avo lenta voajanahary sy sariaka amin'ny tontolo iainana, amin'ny alàlan'ny fiempoana sy fantsom-panafanana avo lenta, namboarina ho kofehy landy niraikitra tamin'ny fanohanan'ny PVC, taorian'ny fizotran'ny dingana am-polony. Ny vokatra dia tsy nasiana savoka paraffin voahosotra, izay manimba ny fahasalamana, ary salama sy tsy misy fofona. Ireo singa sy vokatra nariana dia resina thermoplastic azo averina.